काठमाडौंमा १ लाख मतगणना: स्थापित तेस्रोमा, कसको मत कति ? – Annapurna Post News
काठमाडौंमा १ लाख मतगणना: स्थापित तेस्रोमा, कसको मत कति ?
May 21, 2022 sujaLeaveaComment on काठमाडौंमा १ लाख मतगणना: स्थापित तेस्रोमा, कसको मत कति ?
काठमाडौं महानगरको मतगणना जारी रहेको छ । १ लाख ३४ मतगणना हुँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहको अग्रता कायमै रहेको छ । उनले ३६२२६ मत ल्याएका छन् । यस्तै कांग्रेस उम्मेदवार सिर्जना सिंहले १९९१० मत पाएकी छन् । एमाले उम्मेदवार केशव स्थापितले १९८५० मत पाएका छन् । केशव स्थापित भन्दा सिर्जना सिंह ६० मतले अगाडि छिन् । सुरुवात देखिनै दोस्रो स्थानमा रहेका स्थापितलाई पछि पार्दै सिर्जना दोस्रोमा उक्लिएकी हुन् ।
काठमाडौं-३१ मा एमाले विजयी-काठमाडौं महानगरको वडा नम्बर ३१ मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।एमालेका सरोज ढकाल ४ हजार ७६७ मतका साथ विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका प्रकाश रानाले २ हजार ९९१ मत पाए । वडाको खुल्ला सदस्य एक जना भने कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । अहिलेसम्म महानगरमा अन्तिम परिणाम आएकामध्ये वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ३१ र ३२ मा एमाले विजयी भएको छ । कांग्रेस वडा नम्बर ६, ७, २७, २८ र ३० मा विजयी भएको छ ।
माओवादीको निष्कर्ष : भरतपुरमा जगन्नाथको उम्मेदवारीले रेणुको जित सहज-काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका जगन्नाथ पौडेलको बागी उम्मेदवारीका कारण रेणु दाहालको जित सहज भएको निस्कर्ष निकालेको छ। जगन्नाथले माओवादीमा नआउने कांग्रेसको असन्तुष्ट भोट ‘होल्ड’ गरेकाले रेणुलाई सजिलो भएको ठम्याइ उसको छ।
‘मतगणनामा देखिएको भोटिङ प्याटन हेर्दा जगन्नाथजीको उम्मेदवारी नभएको भए काँग्रेसको असन्तुष्ट मत एमालेका उम्मेदवारलाई जान्थ्यो’, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुन अनन्तले शनिबार आफ्नै निवास खुमलटारमा सञ्चारर्कीसँग भने, ‘उहाँको उम्मेदवारीले हामीलाई नोक्सान भएन। बरु सजिलो भयो।’
यद्यपि बाहिर चर्चा चलाइएजस्तो गठबन्धनको योजनामा पौडेल उम्मेदवार नभएको स्पष्ट गरे। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्री उमेश श्रेष्ठले उम्मेदवारीबाट पछि हट्न पटकपटक गरेको आग्रह पौडेलले अस्वीकार गरेको पुनले उल्लेख गरे।
मतगणनाका क्रममा भुइँकटहर चिन्हबाट स्वतन्त्रमा चुनाव लडेका पौडेलले समग्रमा १० प्रतिशत र कांग्रेसको संगठित मत ३० प्रतिशत ल्याएको माओवादी केन्द्र चितवनका संयोजक रामचन्द्र अधिकारीले बताए। अधिकारीले पनि पौडेलले पाएको सबै मत एमाले उम्मेदवार विजय सुवेदीलाई थपिएको भए रेणुको जित कठिन हुन सक्ने स्वीकार गरे।
भरतपुरमा आयोजित सत्ता गठबन्धनको संयुक्त चुनावी आमसभाबाटै प्रधानमन्त्री देउवा र आफ्ना पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उम्मेदवारी फिर्ता लिन पौडेललाई गरेको आग्रह उनले अस्वीकार गरेको पुनको भनाइ थियो। पुनले भरतपुरमा एमालेकै मतदाताको आकर्षण पनि माओवादीप्रति देखिएको बताए।
भरतपुर महानगरमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच चुनावी गठबन्धन थियो। रेणु गठबन्धनका तर्फबाट मेयर पदकी साझा उम्मेदवार हुन्। राप्रपासँग गठबन्धन गरेको एमालेले मागमति प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य विजय सुवेदीलाई राजीनामा गराएर मेयरमा उम्मेदवार बनाएको थियो।
ब्युटी प्याजेन्ट प्रकरण : ब
८६ स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक, कांग्रेस पहिलो, अरु को कतिमा ?